यस्तो छ प्रचण्ड-सापकोटाको २७ वर्षदेखिको अबिराम सम्बन्ध
आईतबार, माघ ५, २०७६
काठमाडौं, माघ ५ : लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाको सभामुखको भूमिकामा अन्ततः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना ‘खास मान्छे’ अग्नि सापकोटालाई पुर्‍याउने भएका छन्।
नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी केही दिनभित्रै संघीय संसदको प्रमुखको कुर्सीमा पुग्नेछन्। केही संकट पर्दा प्रचण्ड अग्निको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे बिच रिसोर्ट पुग्थे। र, सधैं नै उनीसँगै हुने एक्ला नेता हुन्थे– अग्नि सापकोटा।
०४८ सालमा प्रचण्ड नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बनेपछि राजनीतिमा सापकोटाको खास उदय सुरू भएको हो। त्यही बेलामा उनले नेकपा एकता केन्द्रलाई समर्थन गरे। केही वर्षको अन्तरालमै एकता केन्द्रमा विभाजनको स्थिति आयो। प्रचण्ड नेतृत्वको समूह सशस्त्र युद्धद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
तर, निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठहरु त्यसको विपक्षमा देखिए। त्यो बेला सापकोटाले प्रचण्डलाई समर्थन गरे। लामा, श्रेष्ठहरुसँग सैद्धान्तिक मतभेद भएपछि प्रचण्डले ०५१ सालमा नेकपा माओवादी गठन गरे। त्यही बेला माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका सापकोटा प्रचण्डका खास सहयोगी पत्रका रुपमा रहँदै आएका छन्।
०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला उनी प्रचण्डका दाहिने हात भएर काम गरेका थिए। युद्धका बेला माओवादी र सरकारबीच भएको दोस्रो वार्ता टोलीमा प्रचण्डले सापकोटालाई समेत समावेश गरेका थिए।
खुला राजनीतिमा आएपछि सापकोटाले साविकको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन जिते। ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने उनी सिन्धुपाल्चोक १ बाट निर्वाचित भएका थिए। सापकोटाले सूचना तथा सञ्चार र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेको छन्।
प्रचण्डका अप्ठ्यारोका सारथी
प्रचण्ड र सापकोटाको विशेष सम्बन्ध छ। खासगरी प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सापकोटाले साथ दिँदै आएका छन्।
‘जनयुद्धका बेला होस् वा खुला राजनीतिमा आएपछि होस् उहाँ (सापकोटा)ले प्रचण्ड कमरेडलाई अप्ठ्यारो परेका बेला साथ दिँदै आउनुभएको छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘सोही कारण अहिले प्रचण्डले उहाँलाई सभामुख बनाउन मरिहत्ते गर्नु भएको हो।’
प्रचण्डलाई राजनीतिक वा पारिवारिक तनाव भएका बेला ‘रिफ्रेसमेन्ट’को चाँजोपाँजो मिलाइ दिने पनि उनै सापकोटा भएको ती नेताले बताए। ‘प्रचण्ड तनाव भएका बेला रिफ्रेसमेन्टका लागि सुकुटे जाने गर्नुभएको छ। त्यसको व्यवस्थापन अग्निजीले नै गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुस् : अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने नेकपाको निर्णय
Published Date: Sunday, 19th January 2020 12:41:16 pm
राष्ट्रिय ध्वजाबहाकको भाग खोसेर यति समुहको हिमालय एयरलाइन्सलाई विमानस्थल ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङको जिम्मा
सर्वोच्चको आदेश- बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगराउनू
‘यात्रुको पीसीआर नगरी उडान भरे कोरोना गाउँ-गाउँमा पुग्छ’
‘मेडिकल माफिया हाबी हुँदा पूरा हुँदैनन् डा. केसीका माग’
नेपाल–चीन सीमाको पिल्लर नम्बर ११ को कथा : कसरी हरायो, कसरी भेटियो?
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ७५५ जना कोरोना संक्रमित
थप १४९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
‘भूकम्पले भन्दा डोजरले बढी पहिरोको जोखिम निम्त्यायो’
‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन सकेन’
कोरोना संक्रमणबाट झापाका एक वृद्धको मृत्यु
किट सकिएपछि वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण बन्द
नेपाल-चीन सीमाका विषयमा सरकारको हतारोमा टिप्पणी गर्‍यो : कांग्रेस
स्याङ्जा पहिरो : एकै परिवारका ९ जनाको मृत्यु (अपडेट)
ललितपुरको वागमती गाउँपालिकामा पहिरो, पाँच घाइते